तपाईंको पाममा त्रिकोणको अर्थ के हो? - PAMPEREDPEOPLENY.COM - ज्योतिष
तपाईंको पाममा त्रिकोणको अर्थ के हो?
घर ज्योतिष हस्तरेखा विज्ञान पल्स ओआई-सैदा फराह द्वारा सैदा फराह नूर जून,, २०१। मा
हाम्रो हथेलीमा रेखाहरू र उनीहरूले वास्तवमा के दिन्छन् भन्ने कुरा बुझ्न रोचक हुन्छ। एउटा यस्तो चाखलाग्दो कुरा जुन मानिसहरूले प्रायः तिनीहरूको हथेलीमा फेला पारेका हुन्छन् अचानक बनेका त्रिकोणहरू।
यदि एउटाले तिनीहरूको पामलाई याद गरे, तिनीहरूले स्पष्ट र नियमित त्रिकोणहरू देख्नेछन् जुन सँधै शुभ प्रभावहरू हुन्छन्।
पाममा बिभिन्न स्थानहरूमा यी त्रिकोणहरूले फरक अर्थहरू जनाउँदछ। यी त्रिकोणहरू पाममा तिनीहरूको स्थितिमा आधारित बुझ्नु एकदम चाखलाग्दो अध्ययन हो।
छालाको लागि रातो रक्सीको फाइदा
व्यक्तिहरूका बारेमा कसरी जान्ने उनीहरूको पामलाई हेरेर
पामको बिभिन्न स्थितिमा त्रिकोणले के गर्छ पत्ता लगाउनुहोस् ...
शुक्रको पर्वतमा ठूलो त्रिकोण
ठूलो त्रिकोण ठूलो हृदय को सूचक हो। यो भविष्यवाणी गरिएको छ कि शुक्रको पर्वतमा एक त्रिकोणले जनाउँछ कि व्यक्ति सरल, जन्मजात र भावनात्मक हुन्छ प्रेमीको रूपमा जो उच्च स्तरको साथ सभ्य जीवन बिताउँदछ। अर्को तर्फ, यदि हथेलीमा एक दोष त्रिकोण छ, तब व्यक्ति एक अमर प्रेमी हुनेछ।
मंगल ग्रहको पर्वतमा एउटा त्रिकोण
यदि त्यहाँ मंगल ग्रहको त्रिकोण छ भने, त्यहाँ त्यहाँ संभावना छ कि व्यक्ति एक योद्धा बन्छ र पनि साहस र धैर्य प्रदर्शन को लागी उसले / त्यो गर्न योजना छ केहि पनि। तर अर्कोतर्फ, यदि त्रिकोण मंगल ग्रहको माउंटमा छ र दोषपूर्ण छ भने, तब व्यक्ति भ्यागुता जस्तो देखिन्छ।
बृहस्पति को पर्वत मा एक त्रिकोण
यदि व्यक्तिको बृहस्पतिको पर्वतमा त्रिकोण छ भने, त्यसपछि व्यक्ति कूटनीतिक हुनेछ र ऊ सधैं उनको प्रगतिको लागि चाहन्छ। अर्को तर्फ, यदि त्रिकोण दोषपूर्ण पक्षमा छ, तब व्यक्ति गर्व र स्वार्थी हुन्छ।
शनिको पहाडमा एक त्रिकोण
यदि व्यक्तिको शनि माउन्टमा एक दोषहीन त्रिकोण छ भने, यसले व्यक्ति बहिष्कार र आकर्षणमा अधिकार हो भनेर संकेत गर्दछ। अर्को तर्फ, त्रिकोण दोषपूर्ण पक्ष मा छ भने, व्यक्ति एक ठूलो धोका र सबैभन्दा अविश्वसनीय हो भनिन्छ।
मुख्य रेखामा एक त्रिकोण
यदि मुख्य रेखामा त्रिकोण छ, भन्दा व्यक्ति धेरै बुद्धिमान देखिन्छ र ऊ / उनी शिक्षाको साथ महान छ। अर्कोतर्फ, यदि व्यक्तिको भाग्य रेखामा कुनै त्रिकोण छ, भने यो अशुभ मानिन्छ र व्यक्ति उसको / उनको जीवनमा असफल हुनेछ।
सूर्यको पर्वतमा एउटा त्रिकोण
यदि एक व्यक्तिको सूर्य पर्वतमा त्रिकोण छ भने, त्यो व्यक्ति धेरै धार्मिक र अरुको शुभचिन्तक भनिन्छ। तर, यदि त्रिकोण दोषपूर्ण पक्षमा छ, तब यी व्यक्तिहरू अक्सर समाज द्वारा आलोचना हुनेछन्। उनीहरूले आफ्नो जीवनमा कुनै पनि सफलताको स्वाद लिन सक्दछन्।
मंगल ग्रहको क्षेत्र मा एक त्रिकोण
यदि मंगल ग्रहको क्षेत्र मा एक त्रिकोण छ, तब व्यक्ति आफ्नो जीवन मा एक सफल वैज्ञानिक हुन्छ। तिनीहरू पनि आफ्नो जीवन मा ठूलो सफलता प्राप्त गर्न भनिन्छ। यदि जीवन रेखा मा त्रिकोण छ, तब यो व्यक्ति को लामो जीवन को संकेत गर्दछ।
विवाह रेखामा एक त्रिकोण
यदि त्यहाँ एक व्यक्तिको विवाह लाइन मा त्रिकोण छ, तब व्यक्ति को विवाह र उसको / उनको विवाहित जीवन मा धेरै बाधा को संभावना हुनेछ। तिनीहरू लगभग असफल रहन। अर्कोतर्फ, यदि कुनै व्यक्तिमा चन्द्रमामा त्रिकोण छ, भने त्यहाँ उनलाई / उनीका लागि विदेश जाने र सफल हुने संभावनाहरू छन्।
यदि एक त्रिकोणमा / लाईफ लाइन र हेड लाइन द्वारा बनाईन्छ
यदि जीवन रेखा र हेड लाइनमा बनेको त्रिकोण छ भने, यो व्यक्तिका लागि शुभ मानिन्छ। अर्कोतर्फ, यदि त्यहाँ कुनै त्रिकोण छ कि हेल्थ लाइन र हेड लाइन द्वारा गठन गरिएको छ, तब व्यक्तिलाई धेरै बौद्धिक मानिन्छ।
तपाईंको पाममा कसरी त्रिशूल चिन्ह सफलताको लागि सम्बन्धित छ!
यदि एक त्रिकोण स्वास्थ्य रेखा र जीवन रेखा मा गठन छ
यदि त्यहाँ एक त्रिकोण छ कि स्वास्थ्य रेखा र जीवन रेखा मा गठन हुन्छ, तब यो संकेत गर्दछ कि व्यक्ति यो संसार मा ठूलो बनाउन लाग्छ। अर्कोतर्फ, यदि त्रिकोण को रेखाहरु को बिच्छेद छ, तब व्यक्ति स्वार्थी भनिन्छ र ऊ / उनी भौतिकवादी पनि हो।
तपाईंको Palms मा लेटर एक्स के प्रकट गर्दछ
त्यसोभए, के तपाईंसँग तपाईंको पामको कुनै अंशमा त्रिकोण छ? हामीलाई तल टिप्पणी सेक्सनमा थाहा दिनुहोस्।
म तपाईंलाई माया गर्छु भन्न हास्यास्पद तरीका
कसरी योग संग बस्ट आकार कम गर्न
घरमा कबूतर गुँड राम्रो वा नराम्रो छ
छिपकली महिलाको लागि दायाँ हातमा खस्दै
गिलास को रस को गिलास मा क्यालोरी